Transera: Analytics momba ny fifandraisana amin'ny mpanjifa ho an'ny ivon-toerana fifandraisana
Alakamisy, Aprily 10, 2014 Alakamisy, Aprily 10, 2014 Douglas Karr
Transera dia manolotra lozisialy ho toy ny serivisy, sehatra fanadihadiana an-kalamanjana ho an'ireo ivon-telefaona handrefesana ny fifandraisan'ny mpanjifa. Ny Transera Customer Engagement Analyzer dia fampiharana an-tserasera momba ny fanadihadiana mba hanaovana fanadihadiana momba ny fifandraisan'ny mpanjifa sy ny hetsiky ny mpiasa hamaritana izay mamokatra vokatra tsara indrindra amin'ny orinasa. Ireo fomba fijery ireo dia azo ampiasaina hanovana ny fitondran-tenan'ireo masoivoho sy ireo rafi-pifandraisana eny ifotony sy rahona mifototra amin'ny rahona mba hampandehanana ny fahombiazan'ny mpanjifa. Miara-mivory ny Analyzeran'ny Customer Engagement
Talata, Martsa 24, 2009 Alahady 24 aprily 2016 Douglas Karr
Tamin'ny alatsinainy dia nanana fotoana nitetezana ny Interactions aho, nihaino sy nandinika ny rafitr'izy ireo tamin'ny fiasa, ary nampiasa fampisehoana feno an'i Hey Otto - rafitra fifanakalozan-kevitra amin'ny feo sy tranonkala izay mampiasa teknolojia Interactions any aoriana. Ireo orinasa manana ivon-telefaona lehibe dia midina amin'ny lalana roa samy hafa, na ny rafitra fanekena kabary mandeha ho azy (ASR) na amin'ny fampiasana efitrano malalaky ny mpanatrika foibe fiantsoana. Ny antso mahazatra amin'ny IVR dia mahasosotra, ary